CO-Yakawedzeredzwa furo bhodhi
Akawedzeredzwa machira ndiwo akakurisa chigadzirwa chidimbu. Yakagara pamusoro pe51.39% yeiyo yepasirese vhoriyamu mugove muna 2018 nekuda kwekuda kwakasimba kwemashizha epamusoro-ekuita munzvimbo dzakasiyana dzemabhizimusi. Yakanyanya hukobvu kushivirira kwemashizha aya anovaita akakodzera kune maficha uko akaomesesa maumbirwo ari r ...
IEurope acrylic sheet pamusika saizi yaifungidzirwa pamadhora 1.41 bhiriyoni muna 2016. Kuwedzera kupinda kwechigadzirwa mumashandisirwo akadai semasaini uye sanitary ware inotarisirwa kuve nemhedzisiro yakakura mukukura kwemusika. Iwo epamusoro masimba eacrylic machira, kunyanya sekutsiva ...
Bhizinesi riri kuwedzera kumakambani epurasitiki sekudiwa kweplexiglass surges
Cast acrylic sheet mugadziri Asia Poly Holdings Bhd akanyoresa mambure purofiti ye RM4.08mil yekota yechitatu yakapera Gunyana 30, 2020, zvichienzaniswa nekurasikirwa kwemambure kweRM2.13mil yakanyorwa mukati mekota imwechete gore rapfuura. Iyo yakavandudzwa mambure purofiti kuita kwainyanya kunzi kune iro boka ...
Plexiglass yekutengesa inokwira semakambani anotsvaga nzira dzekudzivirira vashandi
Inguva yakanaka yekuve mune plexiglass bhizinesi. Vagadziri vezvipingaidzo zveacrylic, kusanganisira vanokosora uye varindi vekukosora, macubicle ekuwedzera uye nhovo dzeuso, vaona chakakosha kudiwa kubva kuzvitoro, maresitorendi, mahofisi uye mamwe mabhizinesi atanga kuvhurazve izvo ...
Poly Methyl Methacrylate Musika 2021 Maitiro
Polymethyl Methacrylate (PMMA) inonzi thermoplastic polymer yeMethyl Methacrylate (MMA). Ipurasitiki yakajeka, yakasimba uye isina huremu inowanzo shandiswa seinotsiva girazi nekuda kwesimba rayo uye nemamiriro ekunze kusagadzikana. Vatambi vakuru vemusika ndeMitsubishi Chemical, Evonik, Chi Mei, Arke ...
Saizi yepasi rose PMMA Musika
Saizi yepasi rose yeMMAMA Musika inofungidzirwa kuti isvike madhora mazana mashanu nemakumi masere neshanu nemakumi maviri nemakumi maviri nematanhatu, kubva pamadhora mazana matatu nemakumi masere nemasere emadhora mugore ra2020 inofungidzirwa kukura nekukura zvine hutano hunopfuura 6.7% Panguva ya2021-2026. Global "PMMA Market" 2021-2026 Research Report inyanzvi uye yakadzama kudzidza pane yazvino s ...
Yakawedzeredzwa Acrylic Sheet Musika Saizi Kukura 2021 Kudya Vhoriyamu
Yakawedzeredzwa Acrylic Sheet Musika mushumo ongorora vagadziri vane chimiro, chikuru bhizinesi, nhau, kutengesa, mutengo, mari uye share yemusika. Yakawedzeredzwa Acrylic Sheet mushumo inoratidza kukwikwidza mamiriro pakati pevanogadzira vepamusoro pasirese (Altuglas (Arkema), Taixing Donchamp, Unigel Boka, Po ...
Acrylic Sheet Musika Kugovana, Saizi 2021-2027
Acrylic Sheet Musika Saizi 2021-2027 Global indasitiri Musika yekutsvagisa mushumo inopa kwakakosha kuongorora pamusika mamiriro eAcrylic Sheet vagadziri vane musika saizi, kukura, share, maitiro pamwe neindasitiri mutengo dhizaini. of CO ...
Inogona Plexiglass Kumira COVID?
Apo World Health Organisation yakazivisa COVID-19 denda pakati paKurume, manejimendi kuMilt & Edie's Drycleaners muBurbank, CA, vakaziva kuti vaifanira kuchengetedza vashandi vavo nevatengi. Vakaraira masiki uye vakarembedza nhovo dzeplastiki kunzvimbo dzese dzebasa uko vatengi vanodonhedza c ...
Acrylic girazi nhovo dziri kwese kwese
Acrylic girazi nhovo dzave kuwanikwa kwese kumahofisi, muzvitoro uye mumaresitorendi kutenderera nyika muzera rekoronavirus. Vakanga vakatomisikidzwa padanho revatevedzeri vemutungamiri wenyika. Tichifunga kuti ivo vangori pese pese, unganetseka kuti vanobudirira zvakadii. Busine ...
Acrylic Sheets Musika 2021
Muna 2021, "Acrylic Sheets Market" Saizi, Chinzvimbo uye Musika Maso, musika weAcrylic Sheets anotarisirwa kukura paCAGR ingangoita 5.2% mumakore mashanu anotevera, inosvika 7120 mamirioni emadhora, kubva ku5270 mamirioni emadhora mu2021, sekureva chidzidzo chitsva. Acrylic Sheets Musika Mushumo inopa zvakadzama ...
PLEXIGLASS VS ACRYLIC: CHII CHINONYANYA?
Paunenge uchitarisa mutsauko uripo pakati plexiglass vs acrylic, chokwadi ndechekuti, ivo vakafanana chaizvo. Asi pane misiyano mishoma inozivikanwa. Ngatiputsei izvo plexiglass, acrylic uye asinganzwisisike wechitatu mukwikwidzi, Plexiglas, ari uye mutsauko pakati pawo. Chii chinonzi acrylic? Acrylic iri ...
Plexiglass yekutengesa inokwira semakambani anotsvaga w ...